Ukuqhuma okufudumele: ziyini, izici nokuthi zenzeka kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | 23/08/2021 09:58 | Izimo zezulu
Njengoba sazi, kunezimo eziningi zesimo sezulu ezivelela njengokuxaka futhi azenzeki kaningi. Esinye sezimo zesimo sezulu esingajwayelekile yileso ukushisa okufudumele. Lesi simo senzeka lapho imvula eye yahwamuka lapho iwela ungqimba lomoya owomile noma owomile kakhulu endaweni efudumele.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nokushiswa okushisayo, yiziphi izici zabo kanye nokufuna ukwazi.
1 Yini ukushisa okufudumele
2 Kwenzeka Kanjani Ukushaywa Okushisayo
3 Izibonelo ezithile
4 Ukuqhuma eSpain
Yini ukushisa okufudumele
Lapho imvula izohwamuka iwela ungqimba lomoya owomile endaweni efudumele evame ukusho ukuthi imvula kuvame ukuletha isiphepho. Lapho la manzi awela esibhakabhakeni ehwamuka, abangela umoya owehlayo ukuba aphole futhi abe nesisindo esingaphezu komoya osizungezile. Njengoba umoya ubanda iba nkulu kakhulu uma iqhathaniswa nomoya ojikeleza uzungeze imvelo efudumele. Ngenxa yalokho, ivikela indawo ngejubane elikhulu. Ekugcineni, yonke imvula ngaphakathi komoya owehlayo izohwamuka.
Uma lokhu sekwenzekile, umoya usome ngokuphelele futhi akusekho nhlobo uhlobo lokuhwamuka olungaba khona ngaleso sikhathi. Ngakho-ke, umoya owehlayo awusakwazi ukupholisa phansi bese wenza enye inqubo. Umoya uyaqhubeka ukwehlela ngaphesheya ngenxa yomfutho owutholile ngokunyathela ngaphezu komoya ozungezile. Umoya omile uyehla futhi ufudunyezwe ukucindezela komoya okwenyuka njengoba wehla.
Kumele kucatshangwe ukuthi ukuminyana komoya kuzoqala ukwehla ngenxa yokwanda kwezinga lokushisa elikhulayo. Kodwa-ke, ngenxa yokuthi umoya wehla usuvele unomfutho omningi okuyisa phezulu. Ngokwanda kwezinga lokushisa nokwehla kokuqina kwabantu, isivinini somoya owehlayo singancipha kancane kancane ukuze umoya owomile uzoqhubeka ukwehla njengoba usushisa futhi ushisa. Lokhu kukhuphuka kwamazinga okushisa kungenxa yokufudumala kokuqonda esishilo ekuqaleni.
Kwenzeka Kanjani Ukushaywa Okushisayo
Ekugcineni, umoya owehlayo ufinyelela ngaphezulu kanye nomfutho ohamba ngawo uvundle ebusweni kuzo zonke izindlela uholela ekukhiqizeni umoya onamandla. Lo moya uvamise ukuba yingaphambili. Yini enye, ukufakwa komoya omningi ofudumele, owomile ovela phezulu kubangela ukuthi izinga lokushisa komhlaba likhuphuke kakhulu futhi ngokushesha okukhulu. Ngalokhu kukhuphuka kwamazinga okushisa iphuzu lamazolo ebusweni lehla ngokushesha.
Kumele kukhunjulwe ukuthi ubukhona bazo zonke lezi zimo zomkhathi baba izithako ezidingekayo ukuze kubangelwe ukuqhuma kokushisa. Kodwa-ke, kuyaqabukela kakhulu ukuthi zonke lezi zimo zihlangatshezwe. Ukuze ubone ukuqhuma okushisayo, kwethulwa iphrofayili yokushisa kanye nomswakama we-radiosonde. Lokhu kusetshenziselwa ukubona ukuthi imvelo ikulungele kanjani ukukhiqiza ukushisa okufudumele.
Le radiosonde iyakwazi ukukhombisa izici zemvelo kanye namaphrofayli aqondile wokushisa nomswakama okusebenzela ukubona ukuhamba komoya. Isendlalelo esomile namazinga wekhwalithi ephansi kanye nongqimba olunomswakama nolungazinzile emazingeni aphakathi yizindawo lapho imvula ingahlakulela khona futhi kamuva nokushiswa okufudumele.
Lokhu kushiswa okushisayo kuvame ukuhambisana nemimoya enamandla kakhulu futhi kunzima kakhulu ukubikezela. Yize izindawo ezinhle kakhulu zaziwa kahle ngenxa yemisindo ebonwe noma ebikezelwe ngamamodeli wezemvelo ahlukahlukene.
Sizobona izibonelo ezithile zokushiswa okushisayo okwenzekile emhlabeni. Ezinye izibonelo zokushisa okukhulu noma ukushisa okubikiwe emhlabeni jikelele kufaka phakathi izinga lokushisa e-Antalya, eTurkey, ngoJulayi 10, 1977, okwakungu-66,3 ° C; NgoJulayi 6, 1949, izinga lokushisa ngaseLisbon, ePortugal, lasuka ku-37,8 ° C ngemizuzu emibili lakhuphukela ku-70 ° C, futhi Ngokusobala izinga lokushisa elingu-86 ° C laqoshwa e-Abadan, e-Iran, ngoJuni 1967.
Imibiko yezindaba ithe inqwaba yabantu yabulawa lapho nemigwaqo ye-asphalt yancibilika. Le mibiko evela ePortugal, Turkey nase-Iran akuyona esemthethweni. Akukho okubonakala kuneminye imininingwane ngaphandle kokuqinisekiswa kombiko wezindaba uqobo, futhi ucwaningo lokubhekwa kwesimo sezulu kule ndawo ngesikhathi sesigameko okusolwa ukuthi alukhombisanga bufakazi obusekela le mibiko eyeqisayo.
UKimberley waseNingizimu Afrika iqinisekise ukuqhuma okukhuphule izinga lokushisa kusuka ku-19,5 ° C kuya ku-43 ° C ngemizuzu emihlanu phakathi kuka-21: 00-21: 05 ngesikhathi sesiphepho. Umbonisi wesimo sezulu wendawo wathi ucabanga ukuthi izinga lokushisa selikhuphuke ngaphezu kuka-43 ° C, kepha i-thermometer yakhe ibingasheshi ngokwanele ukubhalisa indawo ephakeme kakhulu. Ngo-21: 45 ntambama, izinga lokushisa lehla laya ku-19,5 ° C.
Ezweni lethu kunezimo ezithile zokushiswa okushisayo. Imvamisa lezi zimo zihlotshaniswa nokuvunguza komoya okunamandla nokwenyuka okungazelelwe kwezinga lokushisa. Amanzi akulo moya ehla futhi ahwamuke ngaphambi kokufika phansi. Kungalesi sikhathi lapho umoya owehlisayo ushisa khona ngenxa yokucinana okubangelwa isisindo esikhulayo sekholomu yomoya ngaphezulu kwabo. Ngenxa yalokhu ukushisa okukhulu okungazelelwe komoya nokwehla komswakama.
Ochwepheshe beMeteorology bathi amafu angabonakala eguquguquka ngokushesha abheke phezulu futhi akhombise ukuvuselelwa okuqinile okuqondile. Yize ibukeka njengeyodwa, zingamafu aguqukela ngokushesha zibheke phezulu ngakho-ke ingabukeka njengeziphepho. Ukuqhuma okufudumele kuvame ukwenzeka ebusuku noma ekuseni kakhulu lapho izinga lokushisa ebusweni liphansi kunesendlalelo ngokushesha ngenhla kwalo.
Ngenxa yemiphumela yabo ebhubhisayo, le migqa eshisayo ingaphanjaniswa neziphepho ngoba nazo zihlotshaniswa nemimoya enamandla. Kodwa-ke, ingahlukaniswa ngomkhondo womonakalo owushiye ngemuva.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuqhuma okushisayo nezimpawu zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ukuqhuma okufudumele